WWF sy ny fampielezan-keviny "Miaina izay novidianay izahay" | Famoronana an-tserasera
"Miaina ny zavatra novidianay izahay", ny fanentanana vaovao an'ny WWF miaraka amin'ny sary telo mifantoka amin'ny menaka palmie
Borosy nify aiza hazo ny volombava ary avy aiza ny karazana tandindomin-doza mba hampisehoana amintsika amin'ny fomba mavesatra ny tanjona lehibe amin'ity fampielezan-kevitra ity mba hampahafantatra ny olona fa izay miaina no mividy.
Ireo volom-bolo ireo dia niova ho hazo tao anaty ala nirehitra ary nitondra teo aloha ny olana misy any Indonezia miaraka amin'ny ala voafoan'ny Palma, izay midika fa misy karazan-javamaniry sasany, toy ny chimpanzees, mijaly amin'izany. Fanentanana nataon'ny WWF, fikambanana mpiaro ny tontolo iainana lehibe indrindra manerantany.
Oroka iray izay ahalavorary mascara mena io no miantso an'izany mandoro ala iray manontolo izy ireo ary izany dia mahatonga ny karazana sasany ahiana ho lany tamingana ary afaka jerena ohatra amin'ny chimpanzee miaraka am-pelatanany ny zanany kely.
Na ilay pizza izay nitarihana an'io fromazy mozzarella io mitadiava chimpanzee hafa ao anatin'ireo kofehiny saika handevona ny tenany alohan'ny afo voalaza etsy ambony ireo sary teo aloha izay mahalala ny fiatraikany ampy hanehoana ny fomba fandraisan'ny kapitalisma sy ny mpanjifa izany planeta azy tanteraka.
Sary telo izay mitondra antsika antso nataon'ity fikambanana ity amin'izao tontolo izao mba hahafantarany izay ampidirin'ny mpanjifa izany. Koa satria ny pejy Behance Azonao atao ny manakaiky kokoa ny fizotran'ny famoronana tsirairay amin'ireo sary ireo miampy ireo GIF mihetsika avy amin'izy ireo.
Izy io koa dia manana angona tena ilaina toa izany 68% ny menaka palmie nojinjaina dia mankany amin'ny sakafo tianao io. Ny famokarana solika palmie no antony lehibe mahatonga ny fandringanana ala eto Indonezia. Koa entanina ny handresy lahatra ireo orinasa hampiasa menaka palmie maharitra, izay hitarika amin'ny famerenana ny fonenan'ny chimpanzee.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » "Miaina ny zavatra novidianay izahay", ny fanentanana vaovao an'ny WWF miaraka amin'ny sary telo mifantoka amin'ny menaka palmie
Tondra-drano ao amin'ny Landscapes an'i Chien Chung Wei
Ny chef hongroà dia manova ny cookies ho lasa zavakanto kanto